सम्बन्ध: कूलज प्रभाव र खोज नवीनता | इनाम पुरस्कार
सम्बन्ध Coolidge Effect
त्यहाँ प्रकृतिको रणनीतिमा एक दोष छ, प्रणालीमा बग, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ। पहिलो व्यक्तिको साथ हामी प्रेममा पर्छौं र बन्धित रहन हाम्रो जीन फैलाउन मद्दत गर्दैन। जीन फैलाउने प्रकृतिको संख्या 1 प्राथमिकता हो। हाम्रो व्यक्तिगत आनन्द योजनामा ​​छैन। त्यसोभए हामी सबै मानिसहरु मा लगभग सबै स्तनधारीहरु लाई बनाइएको छ, वैज्ञानिकहरु लाई कल गर्ने प्राचीन तंत्र Coolidge Effect। यो हाम्रो उर्वरिकरण कार्य सम्पन्न हुने बेला हामीलाई 'उपन्यास' मिलन साथीहरू खोज्न सञ्चालन गर्दछ। यो द्वारा काम गर्दछ सहिष्णुताको निर्माण, वा ऊब सँग, एउटै व्यक्ति वा उत्तेजना। | समय समयमा उनीहरूको उपस्थिति आदिम मस्तिष्कमा 'इनामदायी' हुन्छ। समयको साथ हामीसँग केवल यौन साथीको लागि कम र कम इच्छा छ।
यहाँ छ जहाँ शब्द "द कलिज प्रभाव" उत्पन्न हुन्छ। राष्ट्रपति र श्रीमती कूलिज एक प्रयोगात्मक सरकारको खेत वरिपर [अलग] देखाइएको थियो। जब [श्रीमती कूलिज] चिकन यार्डमा तिनले आएकी थिइन् कि एक प्रेमीले धेरै चोटि झिकेर पिसाब गरिरहेको थियो। उनले परिशिष्टलाई कति चोटि सोध्नुभयो र भनिएको थियो, "प्रत्येक दिन दश बर्ष।" श्रीमती कलकेजले भने, "त्यो राष्ट्रपतिलाई बताउनुहुँदा जब त्यो आउछ।" यसो भनिएको छ, राष्ट्रपतिले सोधे " ? "जवाफ थियो," हे, होइन, श्री श्रीमान, हरेक समय एक फरक मुहार। "राष्ट्रपति:" श्रीमती कूलिजलाई भन्नुहोस्। "
किसानहरूले यो पनि जान्दछ किनकि बुलहरू सिजन प्रति एक पटक मात्र गाय संग मिलेर। तिनीहरूले मैदानमा नयाँ गायहरू खोज्ने सम्पूर्ण जडीबुटी खानुपर्छ। यो पुरा तरिकाले सम्भवतः धेरै जीन फैलिएको यो कार्यक्रम हाम्रो आज सभ्य जीवन संग फिट छैन। हामी बांड गर्न चाहानुहुन्छ र सकेसम्मसम्म रहन प्रतिबद्ध रहन्छौं। धर्म र समाजले यो बग गोल गर्नका लागि सबै प्रकारका रणनीतिहरू प्रयोग गरेको छ - पुरुषहरूलाई धेरै पत्नियाँहरूलाई अनुमति दिँदै, तिनीहरूलाई युवालाई विवाह गरेर ठूलो परिवारलाई प्रोत्साहन दिइन्छ।
कूलिज प्रभाव र पोर्न
यो हाम्रो जीव विज्ञानमा यो दोष हो, कूलिज प्रभाव, जसले इन्टरनेट पोर्नोग्राफी उद्योगलाई बहु बहु अरब डलरको व्यापारमा सुत्न अनुमति दिएको छ। चाँडै एक व्यक्तिको 'थोरै थोरै त्रसित' छ जुन स्पष्ट रूपमा इच्छुक यौन साझेदार छ, उनीहरूले रोकिनेछन्। यो भए तापनि यो एक मात्र छवि हो। त्यसपछि मस्तिष्क कम "उत्पादन पछि" डोपामिन र उत्पादन गर्दछ नयाँ उर्वरकरणको अवसरको लागि। लगभग 10 मिलियन अश्लील भिडियोहरू हरेक दिन मात्र यूकेमा खरिद गरिन्छ, स्पष्ट रूपमा इच्छुक साथीहरूको कुनै कमी छैन। यो सबै एक बेहोश स्तर मा जान्छ तर रोजगारी को व्यवहार को कुनै पनि कम गर्दछ।
सुसमाचार यो छ कि हामी The Coolidge Effect द्वारा फंसिएको छैन। जब हामीले हाम्रा दिमागहरू यसलाई राख्दछौं हामी मानव छौं। मस्तिष्कमा धेरै डोपामिन को प्रभावहरु लाई कम गर्न र अधिक ओक्सीटोकिन संग संतुलन को पुनरुत्थान गर्न को लागी पनि तनाव को स्तर लाई पनि कम गर्न को लागी, हामी अधिक मायालु बंधन र कनेक्शन लाई प्रोत्साहित गर्छन। यी दृढ छन् र हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा र साथसाथै दुवैलाई फिसाउन मद्दत गर्दछ। यस बारे थप जानकारीको लागि हामीले यो वेबसाइटलाई गम्भीर रूपमा सिफारिस गर्दछौ www.reuniting.info.
<< प्रेम लैंगिक रूपमा प्रेम कम लैंगिक इच्छा >>